धार्मिक ग्रन्थहरुमा सुन्नमा आउछन ३३ कोटी देवताले यस्तो-उस्तो गर्छन के साच्चीकै छन त ३३ कोटी भगवान ? यस्तो छ रहस्य ... - Sudur Khabar
धार्मिक ग्रन्थहरुमा सुन्नमा आउछन ३३ कोटी देवताले यस्तो-उस्तो गर्छन के साच्चीकै छन त ३३ कोटी भगवान ? यस्तो छ रहस्य …
प्रकाशित मिति : २९ फाल्गुन २०७४, मंगलवार ०८:३०
हामी हिन्दुहरुले हाम्रा ३३ कोटी देवताको बारेमा विभिन्न चर्चाहरु सुन्ने गरेका छौं । हाम्रा पौराणिक ग्रन्थहरुमा ३३ कोटी देवी देवताको विभिन्न प्रसङ्ग आउने गर्छ । तर, के हाम्रा देवी देवता वास्तवमा नै ३३ कोटी अर्थात ३३ करोड नै छन् त रु कतै यो एक आलंकारिक मात्रै पो हो कि ? या वास्तविक नै हो त ? भन्ने बारेमा।
वृहदाराण्यककोपनिषदको अध्याय तीनका याज्ञवल्क्य र शाकल्य बीचको सम्वाद विचार गर्नु योग्य देखिएको हुनाले यस सम्वादलाई यहाँ प्रस्तुत गरिँदैछ । वृहदारण्यक उपनिषद शुक्लयजुर्वेद अन्तर्गत काण्वी शाखाको वाजसनेयी ब्राम्हण अन्तर्गत पर्दछ । आकारमा यो वृहत अर्थात ठूलो एवं अरण्य ९वनमा० अध्ययन गर्नपर्ने भएको हुनाले यसलाई वृहद्वारण्यक भनिएको हो ।
शाकल्यः देवता कति छन् ?याज्ञवल्क्यः तैत्तिस
याज्ञः वायु डेढ देवता हुन् । किन कि यी बहन्छन् र यसैबाट सबैको वृद्धि हुन्छ